''ဝုန်းပစ်လိုက်မယ်''ဟာသ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး မေ ၁၁ ရက်တွင် ရုံတင်ပြသမည် - Yangon Media Group
”ဝုန်းပစ်လိုက်မယ်”ဟာသ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး မေ ၁၁ ရက်တွင် ရုံတင်ပြသမည်
ရန်ကုန်၊ မေ ၆
လက်ကီးဆဲဗင်း ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကစီစဉ်ပြီး ဒါရိုက်တာခင်စောမျိုး ရိုက်ကူးပုံ ဖော်ထားသည့် ”ဝုန်းပစ်လိုက်မယ်” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို မေ ၁၁ ရက်တွင် စတင်ရုံတင်ပြသသွား တော့မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ယင်းဇာတ်ကားကြီး Press Show ပြသခြင်းကို မေ ၆ ရက်နံနက်ပိုင်းက သမ္မတရုပ်ရှင်ရုံတွင်ပြုလုပ် ခဲ့ပြီး ယင်းဇာတ်ကားကို တွဲဖက်ဒါရိုက်တာ သပြားသု၊ သရုပ်ဆောင်များအဖြစ် ကျော်ရဲအောင်၊ မိုး အောင်ရင်၊ ကျော်ကျော်ဗို၊ ရဲလေး၊ ဂျိုကာ၊ စိုးမြတ်သူဇာ၊ အိန္ဒြာကျော် ဇင်၊ သင်ဇာဝင့်ကျော်၊ ဘေဘီမောင်နှင့် အခြားအနုပညာရှင်များစွာတို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည်။ ဇာတ်ကားတွင်ပါဝင်သည့် အနုပညာရှင်အချို့၏စကားသံများ…..
”ဒီဇာတ်ကားမှာကတော့ အမေက သားလေးယောက်ရဲ့အမေ အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားလေးက ပျော်ပျော်ပါး ပါးဆိုတော့ ပရိသတ်တွေကို လာကြည့်ပါလို့ ပျော်စရာကောင်းပါတယ်လို့။ သူတို့အားမပေးချင်နေ ကျွန်မကိုလာအားပေးပါလို့။ ဒီဇာတ်ကားကို အခုလာကြည့်တဲ့အချိန်မှာလည်း မိုးအောင်ရင်ကို ဘယ်လိုသတိရ မှန်းမသိဘူး။ သူသာရှိရင် အမေတို့ဇာတ်ကားတွေရိုက်ရမှာ။ မင်းသားတစ်ယောက်မရှိဘူးဆိုရင် အမေတို့ဇာတ်ပို့၊ ဇာတ်ရန်တွေ ဇာတ်ကားရိုက်နည်းတာပေါ့။ တစ် ယောက်တိုးရင် တစ်ကားတိုးတာ ပေါ့။ သူမရှိတော့ အမေတို့ဇာတ်ကားတွေလျော့တာပေါ့။ ဒီအတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူး။ အမြန်ဆုံး ဥပဒေဘောင်အတွင်းက လွတ်ကင်းလာပါစေလို့ အမေကဆု တောင်းပေးနေပါတယ်”
”ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ ဟာသဇာတ်မြူးကားလေးပါပဲ။ ကျွန်တော် အဲဒီလိုတော့မြင်ပါတယ်။ အရမ်းကြီး Deep ဖြစ်ပြီး တော့ ဟိုဟာပညာပေးပုံစံတော့ သိပ်တော့မပါဘူးပေါ့။ ဒါကတော့ အစကတည်းကိုက ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လေးပါပဲ။ နောက် ဇာတ်ကားမှာက ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်တွေလည်း အများကြီးပါတာကြောင့် အတွေ့ အကြုံတွေရတာပေါ့။ သူတို့တွေ သရုပ်ဆောင်တဲ့ပုံစံလေးတွေကြည့်တယ်။ သူတို့တွေ ဘယ်လိုလုပ်သွားလဲ။ အဲဒါတွေက ကျွန်တော့်အတွက် အတွေ့အကြုံတွေပေါ့။ ကျွန်တော်က တချို့နေရာတွေမှာ ကျွန်တော့်အခန်းမပါလည်း သူတို့သရုပ် ဆောင်တဲ့ ပုံစံလေးတွေလေ့လာတယ်။ ကြည့်တယ်။ ပျော်ဖို့လည်း ကောင်းပါတယ်။ အထွေအထူး တော့မရှိပါဘူး။ ပုံမှန်လေးပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့က ဒီသရုပ်ဆောင် စီနီယာအစ်ကို၊ အစ်မတွေနဲ့ အရှေ့ မှာလည်းဆုံခဲ့ဖူးပါတယ်။ နောက် လည်းဆုံမယ်လို့ထင်ပါတယ်”
”ကျွန်တော်ကတော့ ဒီ ဇာတ်ကားမှာ အခန်းလည်းနည်းပါတယ်။ အခန်းနည်းပေမယ့်လည်း ပရိသတ်ကြီးကို ဟာသလေးတွေနဲ့ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ထားပါတယ်”
ဒိန်းပိုပိုဒေါင်၏ စုကြေးလေလံမဲကိစ္စ ပြန်လည်ဖြေရှင်းရန် နည်းလမ်းရှာဖွေနေသည်ဟု ဒိန်းဒေါင်ေ??
နယူးအော်လင်း ဂျက်ဇ်ဂီတပွဲတော် ဆဋ္ဌမမြောက်နေ့တွင် Aerosmith အဖွဲ့ ဖျော်ဖြေ
ကျောက်ဖြူတွင် ခွေးရူးကိုက်၍ တစ်နေ့တည်း လူ ၂၂ ဦး ဒဏ်ရာရ၊ စတင် အကိုက်ခံရသည့် ကလေးမ ဒဏ်ရာပြင်??
မန်စီးတီး အသင်းထက် ပိုသာသည့် လစာဖြင့် ဆန်းချက်ဇ်အား မန်ယူ ကမ်းလှမ်း
ဒေါ်လာဈေး ဂယက်ကြောင့် ပြည်ပ သွင်းကုန်များ ဈေးတက်သော်လည်း ပြည်တွင်းထုတ် အခြေခံစားသောက်ကု??
ငွေကျပ် ၉ သိန်းကျော် ကုန်ကျခဲ့သော်လည်း ထိုင်းတွင် အလုပ်မရရှိဟုဆိုကာ MoU လုပ်သား ၃၈ ဦး မြဝတြီ??
ဆောမြို့၌ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ကျောက်မီးသွေးတွင်းထဲ၌ အန္တရာယ်ရှိသော အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့မျ??
ဆော်ဒီအာရေဗီးယားတွင် အမျိုးသမီးများကို စစ်တပ်ထဲ ဝင်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီ
တရားမဝင် ကုန်သွယ်မှုအဖြစ် တားဆီးပိတ်ပင်ထားသော မြန်မာ့ထောပတ်သီး တရုတ်နိုင်ငံသို့ တရားဝင်တင?